Ogaden News Agency (ONA) – Madaxwaynaha Iran Xassan Ruuxaani oo Booqanaya Dalka Faransiiska.
Madaxwaynaha Iran Xassan Ruuxaani oo Booqanaya Dalka Faransiiska.
Madaxwaynaha dalka Iran Xasan Ruxaani ayaa booqanaya dalka Faransiiska kadib saddex maalmood oo uu joogay wadanka Talyaaniga. Mr. Ruuxaani ayaa la filayaa inuu saxiixo heshiisyo ganacsi kadib markii laga qaaday Iran cunoqabatayntii Qaramada Midoobay ay kusoo rogtay dalkaas.
Heshiisyada uu saxiixayo waxaa kamid ahaan doona heshiis ay Iran ka gadanayso in ka badan boqol diyaaradood shirkada Airbus ee laga leeyahay dalka Faransiiska. Mr. Ruuxaani ayaa la kulmi doona madaxwaynaha Faransiiska Francois Hollande.
Booqashada shanta maalmood ah ee Ruuxaani ee Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa ah booqashadii ugu horaysay ee madaxwayne Iran in kabadan toban sano iyadoo madaxwaynaha Iran uu doonayo inuu dib u dhiso xidhiidhka ganacsi iyo inuu galo heshiisyo ganacsi oo cusub.
Iran ayaa u baahan doonto diyaarado cusub sanadaha soo socda iyadoo dib u soo celinayso duulimaadyadii caalamiga ahaa ee ay cunaqabataynta saarnayd. Shirkada samaysa baabuurta ee Faransiiska ayaa sidoo kale bilaabi doonta inay Iran ganacsi la samayso. Mr. Ruuxaani ayaa saxaafada u sheegay inuu heshiis lagali doono Airbus, shirkadaha baabuurta ee Peugeot iyo Renault.